Politika momba ny tsiambaratelo - GoViral
Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia mifehy ny fomba fanangonana, fampiasana, fitazonana ary famoahana vaovao voangona avy amin'ny mpampiasa (tsirairay avy, "Mpampiasa") iray amin'ny tranokala https://goviral.ai ("Site"). Ity politika manokana ity dia mihatra amin'ny tranokala sy ny vokatra sy serivisy rehetra natolotry ny GoViral.
Azontsika atao ny manangona fampahalalana momba ny mombamomba anay manokana amin'ny mpampiasa amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany fa tsy voafetra ihany, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpampiasa, misoratra anarana amin'ilay tranokala, mametraka baiko, misoratra anarana amin'ny gazety, mameno endrika ary mifandraika amin'ny hetsika hafa, serivisy, fiasa na loharano izay ampiasainay amin'ny tranokalanay. Mety angatahina ny mpampiasa, raha ilaina, anarana, adiresy mailaka, adiresy mailaka. Na izany aza, ny mpampiasa dia afaka mitsidika ny tranokalanay tsy mitonona anarana. Hanangona ny mombamomba ny mombamomba anay manokana avy amin'ny mpampiasa izahay raha toa ka manolotra an-tsitrapo izany fampahalalana izany aminay. Ny mpampiasa dia afaka mandà tsy hanome fampahalalana momba ny tena manokana, afa-tsy ny manakana azy ireo tsy hanao hetsika sasany mifandraika amin'ny tranokala.
GoViral dia mety manangona sy mampiasa ny mombamomba anao manokana ho an'ireo mpampiasa manaraka:
GoViral dia manana fahendrena hanavao ity politika tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manao izany izahay dia hamerina hijery ny daty nohavaozina eo amin'ny faran'ity pejy ity. Manentana ny mpampiasa izahay hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana hahalalàna ny vaovao momba ny fomba anampiantsika amin'ny fiarovana ireo mombamomba anay manokana. Manaiky ianao ary manaiky fa anjaranao ny mandinika io politikan'ny tsiambaratelo io indraindray ary mahafantatra ny fanovana.
Fanohanana GoViral: [email voaaro]
Nohavaozina farany tamin'ny 24 septambra 2020 ity antontan-taratasy ity.